China bụ mba kacha baa uru ebipụta bọọdụ sekit. Ka ọ dị ugbu a, uru nrụpụta PCB na Eshia dị nso na 90% nke mkpokọta ụwa. N'ime ha, China na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia nwere uto ngwa ngwa. Agbanyeghị, gịnị kpatara ịchọta onye nrụpụta PCB nke gị na China? ...
Iji mezuo ihe ndị injinia elektrọnik dị iche iche chọrọ, ọtụtụ sọftụwia ihe eji arụ ọrụ na -apụta maka ha ịhọrọ na iji, ụfọdụ bụ n'efu. Agbanyeghị, mgbe ị nyefere ndị nrụpụta na PCB faịlụ gị imewe, enwere ike ịgwa gị na ọ bụghị avai ...
PHILIFAST haziri ụdị PCB dị iche iche iji mezuo ihe ndị ahịa anyị chọrọ. Site na mmepe ngwa ngwa na teknụzụ elektrọnịkị, a haziri bọọdụ sekit ebipụta ma tinye ya n'ọrụ n'ụdị ubi niile iji mejuo ihe ọha mmadụ chọrọ.
N'afọ a, ọrịa ọrịa okpueze ọhụrụ metụtara, ntinye nke akụrụngwa PCB ezughi oke, ọnụ ahịa akụrụngwa na -arịkwa elu. Ụlọ ọrụ ndị metụtara PCB emetụtakwala nke ukwuu. Maka ọganihu nke oru ngo a, ndị injinia ga -atụle ịpụ ...
Kedu otu esi ahọrọ onye nrụpụta PCB na China?
Site na mmepe ngwa ngwa teknụzụ elektrọnịkị na China.Ọtụtụ ndị nrụpụta PCB China na -enye ndị ahịa gburugburu ụwa ọrụ ha kacha mma. mana ihe anyị kwesịrị ịma gbasara onye nrụpụta PCB nke China mgbe anyị na ha na -emekọ ihe? ...